ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုအားလုံး chat ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အရာခပ်သိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသုံးပြုရလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံး chat ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ပြောင်နှင့် password တယောက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်ပုံစံများကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးလမ်းဝင်မပါဘဲ chatting စတင်နိုင်ပါသည်။
အိမ်စာမကျြနှာပျေါမှာ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Chat မှာချက်တင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ချက်တင်အပိုင်းဝင်သောအခါ, သင်သည်သင်၏အမည်ပြောင်နှင့် password ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအခန်းရိုက်ထည့်ပါ။ ဆဲ ROOM တွင် IRC system ကိုဆော့ဖ်ဝဲလူကြိုက်များရှိပါတယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံ chat နှင့်လည်းချက်တင်မှတပါးအခြားလှုပ်ရှားမှုများတွင်ချို့တဲ့သော muhabbtt တစ်ဦးစကားလက်ဆုံ၏အဆင့်ကိုဖန်တီးမပေးပါဘူး။
သင်ဘယ်ဖက်အပေါ်တစ်ဦးချက်တင်အခန်းစကားလက်ဆုံဧရိယာထဲသို့ဝင်သောအခါသင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့အခန်းရွေးချယ်စရာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရေဒီယို #radyo စကားကိုနားထောငျဖို့ရိုးရိုးလေး thumbnail ကို #o သို့မဟုတ်ဂိမ်းများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာကို click ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်, သင်ပျော်စရာအချိန်လေးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်င့်မယ်လို့ပြိုင်ပွဲနှင့်ဂိမ်းများအပိုင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
၏ရေဒီယို CHAT ကိုတိမ်းညွတ်နားထောင်ရင်း
သင် chat စဉ်ရေဒီယိုကိုနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ချက်တင် window ၏အောက်ခြေတွင်ရွေးချယ်စရာကိုနားထောငျ၏နည်းစနစ်မဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Options ကို iTunes က, Winamp, ရီးရဲလ်ကစားသမား, ထိုကဲ့သို့သော Windows Media Player ကိုအဖြစ်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိပါတယ်ပါဝင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အစီအစဉ်များပေါ်မှာ click နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
kyawantawthoetrae site koaarrlone chat hphoet loaauttae aahkyayhkan aasouta ue myarr nhaint lotesaung ninehcwm ko myahamyahatat roeshinntae nhaintarar hkaut saim eat hcaeekamhkyetmyarr aasonepyu r lwalkuu hpyitpartaal . sain pahtam usone chat raan saineat kopine aamaipyaungnhaint password t youtshisai hphoet loaautpartaal . aasainnwain ponehcanmyarr kyawantawthoetrae hcanaitko aamyansone lam wainmaparbhell chatting hcatain nineparsai .
aain hcar m kyaya nhar pyaawmhar link ko nhaiut hkyinn aarrhpyint Chat mhar hkyettain hcarmyetnhar pawtwin twaeshi nineparsai . sain hkyettain aapine wain sawaahkar, sainsai saineat aamaipyaungnhaint password rite htaeet hkyinn hpyint tait u aahkaann rite htaeet par . sell ROOM twin IRC system ko sothpwell luukyaitemyarr shipartaal shinaysell hpyitparsai . lonew bhayy kainnlonehkyuan chat nhaint laee hkyettain mhataparr aahkyarr lhuutsharrmhumyarr twin hkyahoettaesaw muhabbtt tait u hcakarrlaatsone eata saint ko hpaantee m payy parbhuu .
lhuutsharrmhumyarr nhaint gaimmyarr nayrarhtine
sain bhaalhpaat aapaw tait u hkyettain aahkaann hcakarrlaatsone eriyarhtell shoet wain sawaahkar sain aamyarraapyarr kwalpyarr hkyarrnarr tae aahkaann rwayhkyaalhcarar twae nineparsai . raydeyo #radyo hcakarrko narr htaw ngya hphoetroeroelayy thumbnail ko #o shoetmahote gaimmyarr aatwat aahkyarr rwayhkyaalhcararko click par lain maal . aahtuu s hpyint, sain pyawhcarar aahkyanelayy twayaamyarrkyee shihkaepartaal in maallhoet pyainepwal nhaint gaimmyarr aapine sayhkyaar hcay ninepartaal .
get nhaint ray deyo laalkwin aasaint ko narrhtaungpyee nhaithkuhcalone aahkyarr aasonepyusuumyarr nhaint aatuu hkyat taihtaung ninepartaal . suuthoet k aahkaann shi sakaeshoet kaungghcwar aahpyit i myay kwat saw i aahkaann luu myarreat rwayhkyaalmhuko saint lyaw saw aarmahkan saw aahchc lar m aakyoehceepwarrko aatwin so htarr ramai .
eat raydeyo CHAT ko taim nywatnarrhtaungrainn
sain chat hcain ray deyo ko narrhtaung hkyintaal sorain, sainhkyettain window eat aouthkyaytwin rwayhkyaa
Yazı Sohbet Tarafından 16.08.2016 Tarih, Saat 3:45 ‘de Eklendi.